हावादारी बन्दै छ नेपाल भ्रमण वर्ष - नेपालबहस
हावादारी बन्दै छ नेपाल भ्रमण वर्ष
काठमाडौं । आगामी वर्ष अर्थात सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने भन्दै केपी ओली सरकार हौसिएको छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको छ । २०७६ वैशाख १ गते पोखराबाट यसको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो ।
भ्रमण वर्ष सफल बनाउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज बैद्यलाई संयोजकको जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ । अहिलेसम्म भएको जम्माजम्मी काम यत्ति हो । यत्तिका भरमा २० लाख पर्यटक ह्वारह्वार्ती ओइरिने ओलीको विश्वास छ । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन ठोस कार्यक्रम भने सञ्चालन भएको छैन । यस प्रयोजनका लागि कुनै पूर्वाधार अहिलेसम्म तयार गरिएको देखिंदैन ।
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तय भएपछि तयारी पनि महत्वाकांक्षी हुनुपर्नेमा सरकार सुस्त भएको उनले आरोप लगाए । नेपाल पर्यटन बोर्डको तयारी नै फितलो छ । भौतिक पूर्वाधारको सर्वथा अभाव छ – पर्यटन व्यवसायी धरेल भन्छन् । स्तरीय सेवा दिने होटल नै थपिएका छैनन् , आउने पर्यटकलाई कहाँ राख्ने हो ? उनी प्रश्न गर्छन् ।
पर्यटन व्यावसायी हरि धरेल भन्छन् – यस्तो सुस्त गतिमा काम भइरहँदा लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल छ । सरकारले घोषणा गरेकै भरमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरा संभव छैन – धरेल भन्छन् । गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि यो अभियान निस्तेज भएको थियो ।
भर्खरै मात्र मन्त्रालयले योगेश भट्टराईलाई मन्त्रीका रुपमा पाएको छ । उनले जतिसुकै गरेपनि २० को लक्ष्य पूरा हुने संभावना फितलो छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार , सन् २०१८ मा नेपाल भित्रने पर्यटक संख्या १० लाख रहेको छ । दुई वर्ष अघि मात्र १० लाख पर्यटक आएको अवस्थामा दोब्बर बढाउने पूर्वाधार तयार भएको देखिएको छैन । अर्का पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य पनि यतिकै भरमा २० लाख पर्यटक ल्याउने कुरा हावादारी मान्छन् । तर अझै पनि तीब्र ढंगले काम गर्ने हो भने असंभव नै भनिहाल्ने अवस्था पनि नरहेको उनको तर्क छ ।
नेपालमा पर्यटन व्यवसायको ठूलो सम्भावना रहेपनि सरकारको उचित ध्यान नपुग्दा हेपिएको अवस्था रहेको उनको ठम्याई छ । महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तय भएपछि तयारी पनि महत्वाकांक्षी हुनुपर्नेमा सरकार सुस्त भएको उनले आरोप लगाए । नेपाल पर्यटन बोर्डको तयारी नै फितलो छ । भौतिक पूर्वाधारको सर्वथा अभाव छ – पर्यटन व्यवसायी धरेल भन्छन् । स्तरीय सेवा दिने होटल नै थपिएका छैनन् , आउने पर्यटकलाई कहाँ राख्ने हो ? उनी प्रश्न गर्छन् ।
एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्था कमजोर छ । स्तरोन्नती गर्ने भनेर काम थालेको यत्तिका समय वितिसक्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । एयर ट्राफिकले हैरान पारेको छ । घण्टौंसम्म विमान अकाशमा होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणमा समेत उदासिनता छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हवाई मार्गबाट आउने पर्यटक संख्या कसरी बढ्ला ? धरेलको प्रश्न छ ।
जसमा सन् २०२० मा चीनबाट तीन लाख ३५ हजार पर्यटक भित्रने उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१८ मा चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्या एक लाख ६६४ मात्र रहेको तथ्याङ्क रहेको पाइन्छ । यस्तै तेस्रो प्रमुख पर्यटक भित्रने मुलुकमा अमेरिका राखिएको छ । बोर्डले गरेको अनुमान अनुसार , सन् २०२० मा अमेरिकाबाट ९९ हजार ५०५ पर्यटक नेपाल आउने छन् । सन् २०१८ मा यसरी नेपाल आउने अमेरिकीको संख्या जम्मा १९ हजार ७८५ रहेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम शिथिल बन्दै छ । एक त ठूला जहाज नै कम छन् , भएका पनि ग्राउण्डेड छन् ।आर्थिक रुपमा चरम घाटामा गएकाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण समेत पत्याउने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको महिना निगमलाई बिना आधार लगानी गर्न नसकिने बताईसकेका छन् । युरोपेली मुलुकले नेपाली उडानलाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या कसरी बढाउने ? प्रश्न गम्भिर छ ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने भरपर्दाे आधार नभएपनि नेपाल पर्यटन बोर्ड भने खयाली पुलाव पकाएर बसेको छ ।बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपक जोशी भन्छन् – हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । अब अन्तिम चरणको तयारी गरे पुग्छ ।तर कस्तो काम भएको छ , त्यो भने उनले खुलाएनन् । बरु भारत, चीन, श्रीलंका र अमेरिकाबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्ने उनको दावी छ ।
उनको भनाईमा सन् २०१९ मा नै नेपाल आउने पर्यटक संख्या १५ लाख पुग्ने छ । तर यसको आधार भने उनले दिएनन् । तर सन् २०२० मा भारतबाट चार लाख पर्यटक भित्रने उनको दावी छ । सन् २०१८ मा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्या दुई लाख ४३८ रहेको बोर्डको वेबसाइटमा देखिन्छ । यसैगरी चीनबाट पनि आउने पर्यटक संख्या बढ्ने अनुमान बोर्डले गरेको छ ।
बोर्डले गरेको अनुमान अनुसारको पर्यटक भित्रने आधार भने केही दिइएको छैन । यसरी हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानले लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिंदैन । खासगरी युरोपसँगको कनेक्टिभिटी सहज नभएसम्म नेपाल आउने पर्यटक संख्या बढ्ने बलियो आधार तयार हुन सक्दैन । साथै सरकारले भर्खरै भिसा शुल्कमा गरेको बृद्धिले समेत पर्यटक आकर्षित गर्ने स्थिति रहँदैन ।
बोर्डको वेबसाइटमा पनि यसबारे अनुमान गरिएको छ । जसमा सन् २०२० मा चीनबाट तीन लाख ३५ हजार पर्यटक भित्रने उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१८ मा चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्या एक लाख ६६४ मात्र रहेको तथ्याङ्क रहेको पाइन्छ । यस्तै तेस्रो प्रमुख पर्यटक भित्रने मुलुकमा अमेरिका राखिएको छ । बोर्डले गरेको अनुमान अनुसार , सन् २०२० मा अमेरिकाबाट ९९ हजार ५०५ पर्यटक नेपाल आउने छन् । सन् २०१८ मा यसरी नेपाल आउने अमेरिकीको संख्या जम्मा १९ हजार ७८५ रहेको पाइन्छ ।
उता, श्रीलंकाकको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ । बोर्डले गरेको अनुमान भन्छ– नेपाल भ्रमण वर्षमा श्रीलंकाबाट एक लाख दुई हजार पर्यटक आउने छन् । जबकी सन् २०१८ मा नेपाल आएका श्रीलंकनको संख्या केवल ७० हजार ६१० जना रहेको छ । बोर्डले गरेको अनुमान अनुसारको पर्यटक भित्रने आधार भने केही दिइएको छैन । यसरी हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानले लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिंदैन । खासगरी युरोपसँगको कनेक्टिभिटी सहज नभएसम्म नेपाल आउने पर्यटक संख्या बढ्ने बलियो आधार तयार हुन सक्दैन । साथै सरकारले भर्खरै भिसा शुल्कमा गरेको बृद्धिले समेत पर्यटक आकर्षित गर्ने स्थिति रहँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शान्ति सुरक्षाको भरपर्दाे आधार हुनुपर्छ । तर नेकपा विप्लवलगायत केही राजनीतिक समूहको आडमा हुने आतंकले पनि पर्यटक आवागमन प्रभावित हुने देखिन्छ । यस्तै सडकको दूरावस्था, स्तरीय बसोबासको अभाव र नयाँ नयाँ ट्रेक रुटको कमीले पनि पर्यटक भित्रने संभावना झिनो देखिएको छ । ओली सरकार नेपाल भ्रमण वर्षका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने तयारीमा मात्र रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
अघिल्लो लेखक्याम्पसमा रेणु पक्षधर र धर्मदेव पक्षधरबीच कुटाकुट, प्रहरीले हेर्यो रमिता
अर्को लेखक्रेडिट कार्ड बोक्ने रहर छ ? गर्नुहोस् अनलाइन आवेदन
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० : पाँच हजार व्यक्तिलाई पर्यटकीय तालीम दिइने